အင်တာနက်ဆိုင်ရောက်ရင်...Taskbar လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့် စေချင်တယ်။ ~ IT_Youth_Donation
" IT_Youth_Donation သို့ အဖွဲ့ နှင့်ပက်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိလိုသူများ၊ အလှူငွေပါဝင်လှူဒါန်းချင်သူများအနေဖြင့်အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းလှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ နတ်သားလေး - 0973083241 လွမ်းပိုင်ရှင် - 0943136207။"
အင်တာနက်ဆိုင်ရောက်ရင်...Taskbar လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့် စေချင်တယ်။
7:40 AM littlekG No comments
ရှိသလို..မသေးသေးတဲ့လူတွေ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်..နောင်လည်း ကျွန်တော်လက်တွေ့ စမ်းပြီး
အပြစ်တွေကို..ပိုစ့်မှာ ရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာပါ....( ဆရာလုပ်လိုသောဆန္ဒမပါ...သောကကင်းစေ
နည်းပညာတွေအံ့မခန်းတိုးတက်လာမှုရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ ကောင်းတဲ့နည်းပညာတွေရော..မကောင်းတဲ့နည်းပညာတွေရောခိုလှုံနေတယ်.
သိသင့်တာတွေ..ဆောင်သင့်တာတွေကို အဆင်ပြေသလို..ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လေ့လာပြီးတင်ပေးသွားမှာပါ။
အခုကျွန်တော်ပြောမှာကတော့ keylogger ဆိုတဲ့ software လေးအကြောင်းပဲဖြစ်မှာပါ။သိပြီးသားလည်းဖြစ်ကြမှာပါ။သိပြီးသား..
လူတွေအနေနဲ့ ကျွန်တော် အခုပြောမယ့် ခေါင်းစဉ်မှာ လိုအပ်ချက်တွေရှိမယ်ဆို ဖြည့်ဆည်းပေး
အရင်တုန်းကတော့ key recorder ဆိုတဲ့device ပေါ့ဗျာ..အခုကတော့ software ပေါ့ဗျာ...
ကျွန်တော် Hacking ပိုင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီးစပြီးလေ့လာမိတာကတော့ ဒီ software လေးအကြောင်းပါ။ကျွန်တော်တို့ တစ်နေ့ တာ
သုံးခဲ့ တဲ့ website တွေ၊ password တွေက သူဆီမှာ auto save လုပ်ပြီးသားဗျ....ညီအစ်ကို..ညီအစ်မများရဲ့ ..
password များ ၊ personal data များမပါသွားနိုင်အောင်..အင်တာနက်ဆိုင်ရောက်ပြီဆိုရင်..Taskbar လေးတစ်ချက်လောက်..
ရှိုးပေးကြပါဗျာ။တွေ့ တယ်ဆိုလည်း သူ့ Logo ကို right click နှိပ်ပြီး...properties ကို ခေါ်ပြီးတာနဲ့သူ့Location ကို ရှာပြီး unistall လုပ်ပြီး All Folder Delete သာလုပ်ပစ်လိုက်ဗျာ..
တကယ်လို့ မလုပ်ရဲဘူးဆိုလည်း..ဆိုင်နာမည်ကိုပြန် Share ပေးပေါ့ဗျာ..။တော်တော်ဆိုးတယ်နော်..အနည်းဆုံး ၅ ရက်လောက်က Data တွေ Password တွေအကုန် Backup လုပ်ပြီးသားပါ..။
ချောမွေ့ ပါစေ...။ ဒီ Software ကိုစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်
ဒါကတော့ သူရဲ့ Logo လေးပေါ့ဗျာ.
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့data တွေကိုဒီလိုSave ထားတာပါ....
Posted in: လေ့လာစရာနည်းပညာ
ကျွန်တော်တို့ IT_Youth_Donation ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့ မိဘမဲ့ ကလေးတွေ၊ ဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကျောင်းတွေ ၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက် နေသူများကို ကူညီပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့အဖွဲ့မှာ တခြားအဖွဲ့ အစည်းများကဲ့သို့တောင့်တောင့် တင်းတင်းမရှိ လှသော်လည်း လူငယ်အများစုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး လိုအပ်သည့်နေရာ များကို တတ်နိုင်သလောက်ကူညီ အားဖြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသော Donation အဖွဲ့အစည်းများ ကိုလည်း ပရဟိတ လုပ်ငန်းများမှာ အတူတကွ ပါဝင် လုပ်ကိုင်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါတယ်ဗျာ။ စစ်မှန်သောမေတ္တာတရားနဲ့ ကူညီဖို့ အသင့်ရှိတဲ့ IT_Youth_Donation အဖွဲ့လေးပါ။
ပရဟိတဆိုသည်မှာ ကိုယ်ကျိုးမငဲ့အများအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပရဟိတ ဆိုေ...
ကျွန်တော်သိခဲ့သောဘိုင်ပင်ဂူ (ဂူပင်) ရွာလေး
မနက်ခင်းတစ်ခုမှာပေါ့…အွန်လိုင်းပေါ်တက်ရင်း “ဂိုင်းပင်ရွာ (ဂူပင်ရွာ) ဘုန်းတော်ကြီးသင်စာသင်ကျောင်း” ဆိုတဲ့ပိုစ့်လေးကိုဆိုဒ်မှာတွေ့ ခဲ့ရတယ...
Password တွေသတိထားနော်...SPY တစ်ယောက်ရောက်နေပြီ...။
Computer နယ်ပယ်က ကျယ်ဝန်းတယ်ဆိုတာ ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ မှာ ဖွာလန်ကျဲ နေတဲ့... softwareများကသက်သေခံနေပါတယ်....တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေ ကို...
website creation (28@z!n1@y)
ဓီဆိုဒ်လုပ်နည်းကတင်ပီးသားဖြစ်ပေမယ် အသစ်ပြန်အသေးစိတတင်ပေးလိုက်ပါတယ် www.weebly.com VISITOR COUNTER အလှဆင်ရအောင် ကလစ်လိ...
Gmail အကောင့်ကဘာလို့ Disabled ဖြစ်ရတာလဲ....။
အခုတလောအမြဲလိုလို ဖြေရှင်းပေးနေရတဲ့ Problem လေးပေါ့ဗျာ..။အကိုရေလုပ်ပါဦး..ကျွန်တော့်အကောင့်... Disabled ဖြစ်သွားတယ်တဲ့..ဘာလုပ်ရမလဲတဲ့..သူ ...
IT_Youth_Donation မှ အလှူပြုမှတ်တမ်းနှင့် ကျေးဇူးတင်လွှာ
ဘိုင်ပင်ဂူရွာလေးသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းမှုပြီးမြောက်ခြင်းအတွက် အဘက်ဘက်မှဝိုင်းဝန်းကူညီကြသော အလှူရှင်များနှင့် ပရဟိတအဖွဲ့ ပေါင်းစုံမှ လူကြီး...
အဖွဲ့ နှင့်ပက်သက်ပြီး အသေးစိပ် သိလိုသူများ၊ အလှူငွေပါဝင် လှူဒါန်းချင်သူများ အနေဖြင့် အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းလှူဒါန်း န...
ဘိုင်ပင်ဂူရွာမှ ကလေးငယ်များအား အလင်းပေးရအောင်
ကျွန်တော်တို့ IT_Youth_Donation အဖွဲ့လေးရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့ မိဘမဲ့ ကလေးတွေ၊ ဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကျောင်းတွေ ၊သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ...
" IT_Youth_Donation အဖွဲ့ နှင့် ပက်သက်ပြီး အသေးစိတ် သိလိုသူများ၊ အလှူငွေ ပါဝင်လှူဒါန်းချင်သူများ အနေဖြင့်အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ နတ်သားလေး - 0973083241 (ရန်ကုန်) - လွမ်းပိုင်ရှင် - 0943136207 (ရန်ကုန်) မလေးမှ အလှူရှင်များ အနေဖြင့် နေဇော်လင်း - 010 2148 677 သို့လည်း မေးမြန်း လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။"
အလည်လာရောက်သူ မိတ်ဆွေများ ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။